TRF द्वारा अनुसन्धान | इनाम फाउन्डेशन: प्रेम, लिंग र इन्टरनेट
हाम्रोबारे TRF द्वारा अनुसन्धान
इवार्ड फाउण्डेशनको टोलीले यूके र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साझेदारहरूको साथमा अनुसन्धान गरेको छ। हामी शीर्ष विश्वविद्यालयहरुमा न्यूरोोस्कोयर विशेषज्ञहरु संग नै नजिक काम गर्दछौं र नैदानिक ​​सेटिंग्स मा लत विशेषज्ञहरु संग। यहाँ केहि वास्तविक अनुसन्धान छ जुन हामीले प्रकाशन गरेका छौं। यो सबै साथीहरूको समीक्षा पत्रिकामा छ।
हाम्रो योकोहामा कागजातहरू मध्ये एक अब खुला-पहुँच, सहकर्मी-समीक्षा पत्रिकामा प्रकाशित भयो। कागज छ प a्क्तिबद्ध गर्दै “युरोपेली अनुसन्धान नेटवर्कका लागि घोषणापत्र इन्टरनेटको समस्यायुक्त प्रयोगमा" व्यावसायिक र उपभोक्ता समुदायहरूको विविध आवश्यकताहरूको साथ पोर्नोग्राफीको समस्यायुक्त प्रयोगबाट प्रभावित। यसले पछिल्लो दशकमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि TRF का सुझावहरू सेट गर्दछ। गहिरो कथा कागज मा यहाँ छ।
जून २०१ TR मा टीआरएफले योकोहामा, जापानमा 2019th औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्‍यो। हामीले सेक्शनमा दुईवटा संयुक्त कागजातहरू दियौं हाइपरसेक्सुअल व्यवहार र अन्य अत्यधिक व्यवहार। मेरी शार्प बोले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारका लतहरूमा अनुसन्धानको बारेमा शिक्षाको चुनौती। डेरिल मीडले प्रस्ताव राख्यो अश्लील शोधकर्ताको समस्याग्रस्त प्रयोग गरी प्रभावित व्यवसायी तथा उपभोक्ता समुदायहरूको विभिन्न आवश्यकताहरु संग इन्टरनेटको समस्याग्रस्त प्रयोगमा एक यूरोपीय अनुसन्धान नेटवर्क को लागी म्यानिफेस्टको संरेखण.
हाम्रो नवीनतम प्रकाशन हो अश्लील लक्षणहरूमा 5th अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पोर्नोग्राफी र यौनसम्पर्क अनुसन्धान पत्रहरू। यो सम्मेलन अप्रिल 2018 मा कोलोन, जर्मनीमा आयोजित गरिएको थियो। कागज प्रकाशित भएको थियो यौन लत र अनिवार्यता 18 मार्च 2019 मा अनलाइन। हामी प्रकाशित संस्करणको लिङ्क प्रदान गर्न सक्छौं अनुरोध। पांडुलिपिको एक ड्राफ्ट प्रतिलिपि बाट उपलब्ध छ अनुसन्धान गेट.
कोलोनबाट सम्मेलन रिपोर्टले हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिलाई यस क्षेत्रमा उद्धृत गर्यो। यो थियो व्यापक दर्शकहरूको लागि साइबरसेक्स लतको विज्ञानलाई संचार गरिँदै।
यो कागज बनाइयो अश्लील लक्षणहरूमा 4th अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पोर्नोग्राफी र यौनसम्पर्क अनुसन्धान पत्रहरू। यो प्रकाशित गरिएको थियो यौन लत र अनिवार्यता 13 सेप्टेम्बर 2017 मा अनलाइन। यो भोल्युम 24, नम्बर 3, 2017 मा छापिएको छ। समीक्षा र संक्षेप सहित थप विवरणहरू मा उपलब्ध छन् TRF Blog। यदि तपाईं यो लेखको प्रतिलिपि चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई मार्फत लेख्नुहोस् टच मा प्राप्त यस पेजको तलमा।
इन्टरनेट प्रवाह मोडेल र यौन अफसोस
मैरी शार्प, इभरेज फाउण्डेशन फाउण्डेसनको मुख्य कार्यकारी अधिकारीले स्टीव डेविससँग लुसी विश्वासफुल फाउन्डेशनसँग एक अध्यायको सहकार्य गरेका छन्। यसलाई "इन्टरनेट प्रवाह मोडेल र यौन अफगानिङ" भनिन्छ। अध्यायमा देखा पर्यो प्रतिबद्ध यौन अपराधहरू भएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दै: अभ्यासका लागि एक गाइड। यो फरवरी 2017 मा रुटलेज द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो र खरीद गर्न सकिन्छ यहाँ। तपाईं पनि पढ्न सक्नुहुन्छ कथा यसको बारेमा।
डा। डेरिल मीड, तत्कालीन अध्यक्ष द रिवार्ड फाउन्डेशनले एक पेपर प्रकाशित गर्‍यो।जोखिम युवा युवाहरू पोर्न उपभोगकर्ताहरूको रूपमा अनुहार "। यो प्रकाशित भएको थियो Addicta: व्यभिचार को टर्की जर्नल 2016 अन्तमा र पूर्ण पाठ निःशुल्कको लागि उपलब्ध छ।
अगस्त 2016, गैरी विल्सन, रेजर्ड फाउन्डेशन को मानद अनुसन्धान अधिकारी,7यूएस नौसेनाका डाक्टरहरु र मनोचिकित्सकहरु संग एक लेखक को लेखक "व्यवहार विज्ञान" मा प्रकाशित भएको थियो: के यौन पोषण सम्बन्धी यौन दुर्व्यवहारको कारण हो? क्लिनिकल रिपोर्टहरूको साथ एक समीक्षा"बाट मुक्त रूपमा उपलब्ध छ व्यवहार विज्ञान वेबसाइट। यो हो सर्वाधिक लोकप्रिय कागज कहिल्यै प्रकाशित छ व्यवहार विज्ञान मा।
गैरी विल्सनले पनि भविष्यका अनुसन्धानको लागि पोर्नोग्राफी हानि फिल्डमा एक प्रमुख पेपर सेट गरेको छ। यो हो "पुरानो इन्टरनेट पोर्नोग्राफीलाई हटाउनुहोस् यसको प्रभाव प्रकट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्" र प्रकाशित गरिएको थियो Addicta, व्यभिचार को टर्की जर्नल, 2016 मा। लिङ्क पूर्ण अध्ययनको लागि निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्दछ।